Ciidamada Jubbaland oo ku dhaqaaqay deegaanka Beerxaani oo Shabaab ay ku sugan yihiin | Baydhabo Online
Ciidamada Jubbaland oo ku dhaqaaqay deegaanka Beerxaani oo Shabaab ay ku sugan yihiin
Ciidamada Maamulka Jubbaland iyo kuwa Amisom, ayaa saaka ku dhaqaaqay deegaanka Beerxaani oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ururka Al Shabaab.
Gaadiid dagaal oo fara badan oo ciidamada Jubbaland iyo kuwa Amisom ay saaran yihiin ayaa waxa ay ka dhaqaaqeen magaalada Kismaayo, waxaana ay u jiheysteen dhanka wadada Deegaanka Beerxaani oo ku yaalo duleedka Kismaayo.
Ciidamada Jubbaland oo ay wehliyaan kuwa Amisom iyo Ciidanka Xooga dalka Somaliya ayaa hada ku sugan deeganada Janaay Cabdalla iyo Cabdalla Biroole oo duleedka Kismaayo ah, waxayna u sii socdaan Deegaanka Beerxaani. Beerxaani waxaa ku sugan Xoogaga Shabaab, dhowr mar waxaa halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Shabaab iyo kuwa Jubbaland, kadib markii ciidamada Jubbaland ay weerareen deegaankaasio.
Inta badan ciidamada Xooga dalka Somaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa gaara deegaanka Beerxaani, waxayna ka soo noqdaan iyagoo halkaasi ka fuliyay howlgalo, balse ma jirto ciidamada inay halkaasi ka sameystaan Saldhig ciidan oo Shabaab ay kala dagaalamaan, kana difaacdaan Deegaankaasi.
Saraakiisha ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa shalay ku dhawaaqay inuu bilaabanaayo howlgalo ka dhan ah Ururka Al Shabaab, si Shabaabka looga saaro deeganada Jubadda hoose ay ka joogaan.
Ciidamada Shabaab ayaa ku sugan deegaano fara badan oo ka tirsan Gobolka Jubadda hoose, halka guud ahaan Gobolka Jubadda dhexe ay Shabaab haystaan.